May 1, 2019 - MM Live News
မကြာမီ ရေငုပ်သင်္ဘော ပိုင်တော့မယ့် မြန်မာနိုင်ငံ
ပြည်တွင်းသတင်း / By MM Live
မြန်မာ့တပ်မတော်က ရေငုပ်သင်္ဘောကိုမကြာမီအချိန်အတွင်းမှာပဲ ပိုင်ဆိုင်နိုင်တော့မယ်လို့ တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ဘီဘီစီကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ ရေငုပ်သင်္ဘ࿿ောပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာက ဝယ်ရတာသိပ်မခက်ဘူး။ အရေးကြီးတာက သူရဲ့ အခြေချမယ့်နေရာ တွေ၊ သူနဲ့ဆက်စပ်တဲ့အထောက်အပံ့ပစ္စည်းတွေ၊ အသုံးပြုနိုင်ဖို့လေ့ကျင်သင်ကြားမှုတွေက ပိုအရေးကြီးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ရေငုပ်သင်္ဘ࿿ောမှာသုံးနိုင်တဲ့ သင်တန်းပြီးထားတဲ့သူတွေရှိနေပါပြီလို့ သူကဆို ခဲ့ပါတယ်။ “သင်တန်းကာလက ၅နှစ်ကနေ ၇နှစ်အတွင်းရှိတယ်။ ဒါကရေငုပ်သင်္ဘ࿿ောပိုင်ဆိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်ထဲမှာ သင်တန်းကာလကိုထည့်တွက်တယ်။ သင်တန်းကာလက အောင်မြင်ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုအတွင်းမှာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ်ဆိုတာက ဘယ်တော့ဆိုတာကိုတွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်” လို့ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ဘီဘီစီကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါကလည်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် နှင့် အဖွဲ့ဝင်တွေ ဧပြီလ ၂၆ ရက်၊ ရုရှားနိုင်ငံ၊ စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ ရုရှားရေတပ်စခန်းရဲ့ အက်မာတိုင်စကီဗာဖီ သင်္ဘ࿿ောကျင်းမှာ ရေငုပ်သင်္ဘော ထုတ်လုပ်နေမှု အခြေအနေတွေနဲ့ ရေငုပ်သင်္ဘ࿿ောတွေ …
မကြာမီ ရေငုပ်သင်္ဘော ပိုင်တော့မယ့် မြန်မာနိုင်ငံ Read More »
အ​မော​ဖောက်​လာတဲ့အတွက်​ အ​ရေး​ပေါ်​ဆေးကုသမှုခံယူနေရတဲ့ ကစ်ကစ်….
အနုပညာကဏ္ဍ / By MM Live
ဟာသသရုပ်ဆောင်မကစ်ကစ်အရေးပေါ်ဆေးရုံထပ်တင်ထားရပါတယ်…ကျွန်တော်ကဘန်ကောက်ရောက်နေတဲ့အတွက်အနီးကပ်ဘာမှမကူညီနိုင်လို့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါဦးခင်ဗျာ… အခြေနေကတော့အဆုပ်ထဲရေတွေထပ်ဝင်နေုပြီးအမောဖောက်နေပါတယ်…ပင်လုံဆေးရုံမှတဆင့် သင်္ဃန်းကျွန်းဆေးရုံ သင်္ဃန်းကျွန်းဆေးရုံမှတဆင့် ရန်ကုန်အရေးပေါ်ဆေးရုံကြီးမှာတင်ထားရပါတယ်… ခါးကနေရေဖောက်ပေးပေမယ့်ရေနဲ့သွေးတွေကရောနေပြီး ဆရာဝန်ပြောပြချက်အရ အတွင်းကပျက်စီးနေပြီဖြစ်တာကြောင့် လူနာကိုပိုပြီးဂရုစိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း အချိန်မရွေး အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားပါတယ်… အနုပညာမောင်နှချင်း ကျွန်တော်ရှိတဲ့အချိန်မှာအသက်ကယ်နိုင်ပေမယ့် ကျွန်တော်ကဘန်ကောက်မှာကြာမှာ မို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်…အဝေးကနေကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်တာကပရဟိတညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ ကူညီပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံပေးရုံရှိပါတော့တယ်ဗျာ… ကြိုတင်တောင်းပန်ပါရစေ…ကျွန်တော်တင်တဲ့Post အောက်မှာ အနုပညာရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေကို ပုတ်ခတ်စော်ကားတဲ့စကားလုံးတွေမရေးကြပါနဲ့ခင်ဗျ.ကုသိုလ်ပဲယူကြပါ…အကုသိုလ်ကိုမယူုကြပါနဲ့… တေးရေးမင်းကို ( ခ) မင်းခေတ်မင်း အနုပညာသစ်ပြတိုက်ဖောင်ဒေရှင်း 1.5 .2019 UNICODE ဟာသသရုပျဆောငျမကဈကဈအရေးပျေါဆေးရုံထပျတငျထားရပါတယျ…ကြှနျတျောကဘနျကောကျရောကျနတေဲ့အတှကျအနီးကပျဘာမှမကူညီနိုငျလို့ဝိုငျးဝနျးကူညီပေးကွပါဦးခငျဗြာ… အခွနေကေတော့အဆုပျထဲရတှေထေပျဝငျနေုပွီးအမောဖောကျနပေါတယျ…ပငျလုံဆေးရုံမှတဆငျ့ သင်ျဃနျးကြှနျးဆေးရုံ သင်ျဃနျးကြှနျးဆေးရုံမှတဆငျ့ ရနျကုနျအရေးပျေါဆေးရုံကွီးမှာတငျထားရပါတယျ… ခါးကနရေဖေောကျပေးပမေယျ့ရနေဲ့သှေးတှကေရောနပွေီး ဆရာဝနျပွောပွခကျြအရ အတှငျးကပကျြစီးနပွေီဖွဈတာကွောငျ့ လူနာကိုပိုပွီးဂရုစိုကျရမယျဆိုတဲ့အကွောငျး အခြိနျမရှေး အသကျအန်တရာယျစိုးရိမျရတယျဆိုတဲ့အကွောငျးပွောထားပါတယျ… အနုပညာမောငျနှခငျြး ကြှနျတျောရှိတဲ့အခြိနျမှာအသကျကယျနိုငျပမေယျ့ ကြှနျတျောကဘနျကောကျမှာကွာမှာ မို့ စိတျမကောငျးဖွဈရပါတယျ…အဝေးကနကြှေနျတျောလုပျပေးနိုငျတာကပရဟိတညီအဈကိုမောငျနှမတှေ ကူညီပေးကွဖို့မတ်ေတာရပျခံပေးရုံရှိပါတော့တယျဗြာ… ကွိုတငျတောငျးပနျပါရစေ…ကြှနျတျောတငျတဲ့Post အောကျမှာ အနုပညာရှငျမငျးသားမငျးသမီးတှကေို ပုတျခတျစျောကားတဲ့စကားလုံးတှမေရေးကွပါနဲ့ခငျဗြ.ကုသိုလျပဲယူကွပါ…အကုသိုလျကိုမယူုကွပါနဲ့… တေးရေးမငျးကို ( ခ) မငျးခတျေမငျး အနုပညာသဈပွတိုကျဖောငျဒရှေငျး …
အ​မော​ဖောက်​လာတဲ့အတွက်​ အ​ရေး​ပေါ်​ဆေးကုသမှုခံယူနေရတဲ့ ကစ်ကစ်…. Read More »
ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ကန်သာယာရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာလမ်း၊ အမှတ်(၁၁၈)နေ ဒေါ်အေးရွှေ ၇၀နှစ်၊ ရှမ်း/ဗုဒ္ဓ (မြင်းဖြူနှစ်ကောင်တိုင်းရင်းဆေးတိုက်ပိုင်ရှင်)၊ (ဖ)ဦးအန်ပန်သည် ပင်လုံမြို့၊ ကမ္မဌာန်းကျောင်းတိုက် ဆွမ်းကပ်လှူပွဲသို့ သွားရောက်ပြီး ၂၈-၄-၂၀၁၉ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်း နေအိမ်သို့ ပြန်ရောက်စဉ် ….. နေအိမ်အဝင်ပေါက် ကားဂိုဒေါင်အောက်တွင် သားမက်ဖြစ်သူ စိုင်းဆေမွန်(ခ)ဆေမွန်အား လည်းကောင်း၊ နေအိမ်အပေါ်ထပ် ယာဘက်အခန်းအတွင်း သမီးဖြစ်သူ မနန်းခမ်းလှိုင်နှင့် မြေးဖြစ်သူ စိုင်းဖဖ တို့အား လည်းကောင်း၊ ဝဲဘက်အခန်းအတွင်း၌ အိမ်ဖော် ဖြစ်သူ မအေးမိုးအား လည်းကောင်း၊ ပြင်ပဒဏ်ရာအသီးသီးဖြင့် သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး နေအိမ်ရှိ ရွှေထည်ပစ္စည်းမျိုးစုံ (၁၅)မျိုး၊ ငွေကျပ်သိန်း (၄၀)အပါအဝင် စုစုပေါင်းတန်ဖိုး ကျပ်(၁၅၅၇) သိန်းခန့် ပျောက်ဆုံးနေသဖြင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအား စုံစမ်းဖော်ထုတ်အရေးယူပေးရန် တိုင်ကြား ခဲ့၍ တောင်ကြီးမြို့မရဲစခန်း …
တောင်ကြီးမြို့(၄)လောင်းပြိုင်လူသတ်မှုတရားခံမိပြီ… Read More »
ထီပေါက်ရင် ဘယ်လိုထုတ်ရမလဲသိချင်သူများအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်….
ဗဟုသုတစုံ / By MM Live
ထီပေါက်ရင် ဘယ်လိုထုတ်ရမလဲ ထီပေါက်ရင် ထီ ရုံးချုပ် ၃၇လမ်းမှာသွားထုတ်ရပါမယ် …ဘာတွေထည့်သွားရမလည်းဆိုတော့…. 1. အိမ်ထောင်စုစာရင်း မူရင်း နဲ့ မိတ္တူ 2. မှတ်ပုံတင်မူရင်း မိတ္တူ 3. ထီလက်မှတ် 4.ပတ်စပို့စ် ပုံ ၃ပုံ ( ၅သောင်းဆုဆိုရင်တော့ ၁ပုံဆိုရပါတယ်) အပေါ်ကအချက်အလက်များကိုယူသွားရပါမယ်..ရုံးချုပ်ရောက်ရင် အပေါက်ဝမှာ အဝင်အထွက်စစ်ဆေးတဲ့ အန်တီ(သို့)ဦးလေးကို ထီသွားထုတ်မလို့ ပြောပြီး နာမည်ရယ် မှတ်ပုံတင်ရယ်ရေး လက်မှတ်ထိုးရပါမယ် …. ပြီးရင် ၃လွှာကို ဓါတ်လှေကား (သို့) ရိုးရိုးလှေကားက တတ်သွားပါ….ဝင်ဝင်ချင်း ဓါတ်လှေကားဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ ထီဆုငွေများထုတ်ယူရန်ဆိုပြီး ရေးထားတယ် ….. အာ့မှာ ပေါက်တဲ့ ထီလက်မှတ်တွေကို ထုတ်ပေးရတယ် …..အာ့ ထီလက်မှတ်နောက်ကျော ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ ဘက်လက်မနဲ့ လက်ဗွေနှိပ်ရပါတယ် …… ပြီးရင် လက်ဗွေနားမှာ …
ထီပေါက်ရင် ဘယ်လိုထုတ်ရမလဲသိချင်သူများအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်…. Read More »
(၃) ကြိမ်မြောက် (၁၀၀၀) ကျပ်တန် သိန်း ၁၅၀၀၀ ထီပေါက်စဉ် စ/ဆုံး ပေါင်းချုပ်…..
(၃)ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၁၀၀၀ တန် ထီပေါက်စဉ် သိန်းတစ်သောင်းခွဲမှ ငါးသိန်းဆုအထိ အက္ခရာနဲ့ဂဏန်းအားလုံး အစဉ်လိုက်တူရမည်။ သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ကခ ၅၈၅၀၂၄ သိန်းငါးထောင် ဎ ၈၃၄၁၄၇ ဗ ၆၂၆၂၈၆ သိန်းနှစ်ထောင် သ ၃၅၈၇၉၈ ဓ ၇၀၅၅၈၈ ဌ ၇၁၄၅၈၉ သိန်းတစ်ထောင် ဈ ၆၉၆၉၇၉ ဒ ၁၁၉၇၈၅ ခ ၇၇၂၄၃၅ ဂ ၇၇၃၀၇၂ သ ၄၇၉၃၅၃ သိန်း(၅၀၀) ယ ၂၃၉၃၈၁ န ၃၅၇၈၆၈ ဠ ၃၀၂၉၅၁ ဗ ၁၃၉၈၂၄ ထ ၇၄၅၉၁၃ ည ၁၅၆၀၆၁ ခ ၇၁၅၀၀၄ ဒ ၉၄၀၄၁၃ သိန်း(၂၀၀) ယ ၂၅၃၃၀၈ …
(၃) ကြိမ်မြောက် (၁၀၀၀) ကျပ်တန် သိန်း ၁၅၀၀၀ ထီပေါက်စဉ် စ/ဆုံး ပေါင်းချုပ်….. Read More »
တချို့ဈေးသည်တွေကိုဈေးမဆစ်ပါနဲ့ တချို့ဈေးသည်တွေဟာ တကယ်ကိုထမင်းတစ်လုပ်စားရဖို့အတွက် ရောင်းချနေရတာဖြစ်ပါတယ်… တကယ်ကို ကွမ်းယာဆိုင်ကဆေးဝယ်သောက်ဖို့အတွက်ရောင်းချနေရတာဖြစ်ပါတယ်… တကယ်ကို အိမ်ပြန်ရင်မျှော်နေမယ့်မိသားစုအတွက် စားစရာတစ်ခုခုပါသွားဖိုိ့ ရောင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်…. သူတို့ပစ္စည်းတွေအတွက် သူတို့ရတဲ့အမြတ်ဟာ ၅၀/၁၀၀ထက် မပိုပါဘူး…. ဒါ့ကြောင့် ဘာမှမဟုတ်တဲ့ပိုက်ဆံအတွက် သင်အတွက်လည်းသိပ်မထိခိုက်ဘူးဆိုရင်ဈေးမဆစ်ပါနဲ့…. သူတို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ကို ကံစမ်းမဲတွေပေးမယ်လို့လည်း လိမ်လည်မပြောပါဘူး…. မကောင်းတာတွေကို ကောင်းပါတယ်လို့လည်း လိမ်လည်မပြောကြပါဘူး…. ပြထားတာတမျိုး ရောင်းတာတမျိုးလုပ်စားနေကြတဲ့ Online ဈေးသည်တချို့တွေလို ရိုက်စားလည်းမလုပ်ကြပါဘူး… ပြခန်းတွေဖွင့် တံဆိပ်ပြပြီး ဈေးကို ၅ဆလောက်တင် ခပ်တည်တည်နဲ့လည်း ရောင်းမစားနိုင်ကြပါဘူး…. သူတို့ဟာ အရှိအတိုင်းအမြင်အတိုင်း ရိုသားစွာရောင်းချသူတွေဖြစ်ပါတယ်….. သင်မတန်မရာဈေးဆစ်တဲ့အခါ မတော်မတရားအဆစ်တောင်းတဲ့အခါ သူတို့မျက်ဝန်းတွေကိုကြည့်ပါ…. အားနာစိတ် အားငယ်စိတ်တွေနဲ့ သင်မဝယ်တော့မှာစိုးတဲ့စိတ် လှည့်ပြန်သွားမှာကြောက်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ တွေဝေနေကြတာကို သင်တွေ့မှာပါ…. ဒါကြောင့် ဖြစ်နိုင်ရင် ဈေးမဆစ်ပါနဲ့ အားပေးပါ….တချို့တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေသာဖြစ်တယ်….. တချို့တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေသာဖြစ်တယ်…. တချို့တွေဟာ …
သင်…မတန်မရာဈေးဆစ်…မတော်မတရားအဆစ်တောင်းပြီး သူတို့မျက်ဝန်းတွေကိုကြည့်လိုက်သောအခါ…. Read More »
ထီဖွင့်ရက်မှာ ထီသည်ဖုန်းဆက်တာကိုစောင့်နေကြသူများနှင့် ထီပေါက်စဉ်ကိုယ်တိုင် မတိုက်ကြသူများ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုမရှိရလေအောင်………
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်နေ အသက်(၅၀)အရွယ်ရှိ ဒေါ်အေးဝင်းအဖို့ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်(၃၀)ခန့်ကစ၍ လစဉ်အောင်ဘာလေထီကို ကြုံသည့်နေရာတိုင်း၌ဝယ်ယူကံစမ်းလေ့ ရှိသည်။ ထီထိုးပြီး၍ လဆန်းတစ် ရက်ရောက်တိုင်း ထီဆိုင်မှ ထီပေါက်ကြောင်းလာရောက်အ ကြောင်းကြားမည့်အချိန်ကို စောင့်မျှော်ရသည်မှာ ဒေါ်အေးဝင်းအတွက် ပုံမှန်အလုပ်တစ်ခုလို ဖြစ် နေသည်။ ထီထိုးခဲ့သည့် သက်တမ်း ဆယ်စုနှစ်သုံးစု ကြာပြီဖြစ်သော် လည်း ကိုယ်တိုင်တစ်ကြိမ်မျှ ထီ မတိုက်ခဲ့ဖူးပေ။‘‘ထီတိုက်လည်း မတိုက် တတ်ဘူး’’ဟု ဒေါ်အေးဝင်းက ဖွင့်ဟသည်။ထို့ကြောင့် ထီပေါက်၊ မ ပေါက်မှာ ထီဆိုင်က အကြောင်း ကြားမှုအပေါ်တွင် မူတည်နေ သည်။ သို့သော် ယခုအချိန်ထိ ထီဆိုင်ထံမှ ဆက်သွယ်ခြင်းမခံရပေ။ဒေါ်အေးဝင်းကဲ့သို့ပင် တာမွေမြို့နယ်နေ ကိုအောင်ထက်လည်း သူဌေးလောင်း မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် လစဉ်ထီကံစမ်းလေ့ရှိပြီး ထီပေါက်စဉ်ဖြင့် ကိုယ်တိုင်ထီ တိုက်ဖူးခြင်း မရှိပေ။ ‘‘ထီဆိုင်ကနေ ဖုန်းနံပါတ် တောင်းထားတော့ …
ထီဖွင့်ရက်မှာ ထီသည်ဖုန်းဆက်တာကိုစောင့်နေကြသူများနှင့် ထီပေါက်စဉ်ကိုယ်တိုင် မတိုက်ကြသူများ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုမရှိရလေအောင်……… Read More »
၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလအတွက် ထူးခြားမည့် ဖြစ်စဉ်များ
၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလအတွက် ထူးခြားမည့် ဖြစ်စဉ်များ အာကာသနှင့် ပတ်သက်ပြီး.. လာမယ့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလအတွင်းမှာ ထူးခြားမယ့် ဖြစ်စဉ်အချို့ကို အာကာသနှင့်စကြဝဠာ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များအတွက် ရေးသားတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ လက်ရှိ လဆန်းပိုင်းမှာ အထူးရေပန်းစား သတိပြုသင့်တာကတော့ စူပါ ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြီး ဖာနီ (Fani) ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခုအတွင်းသို့ ကြီးမားတဲ့ လေစိုင်များ လှည့်ပတ်စီးဝင်တိုက်ခတ်ခြင်းမှ “လေမုန်တိုင်း” များ ဖြစ်လာကြပါတယ်။ “အပူပိုင်း ဆိုင်ကလုံး” ဆိုတာကတော့ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနဲ့ ပစိဖိတ် အနောက်တောင်ဒေသတွေမှာ ဖြစ်တဲ့ မုန်တိုင်းများကို အမည်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အီကွေတာရဲ့ မြောက်ဘက်ခြမ်းမှာဖြစ်တဲ့ မုန်တိုင်းများဟာ နာရီလက်တံ ပြောင်းပြန်လည်ပတ်ကြပါတယ်။ (အတ္တလန်တစ် နဲ့ ပစိဖိတ် မြောက်ပိုင်းမှာ တိုက်ခတ်တဲ့ မုန်တိုင်းများကို “ဟာရီကိန်း” လို့ခေါ်ပါတယ်။ …
၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလအတွက် ထူးခြားမည့် ဖြစ်စဉ်များ Read More »
(၃)ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၁၀၀၀ တန် အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ် တိုက်ရန် ( စ/ဆုံး ) အပြည့်အစုံ
ပြည်တွင်းသတင်း / By MM Live News
(၃)ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၁၀၀၀ တန် သိန်းတစ်သောင်းခွဲ အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ် တိုက်ရန် ( စ/ဆုံး ) အပြည့်အစုံ (၃)ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း တစ်သောင်း ငါးထောင် အထူးဆုကြီး သိန်း ၁၅၀၀၀ ကခ ၅၈၅၀၂၄ မိုးယံ(၃)ကြိမ်မြောက်ကျပ်သိန်း ငါးထောင် ဆုကြီးများ (၃)ကြိမ်မြောက်ကျပ်သိန်း ငါးထောင် ဆုကြီးများ သိန်း ၅၀၀၀ ဎ ၈၃၄၁၄၇ မိုးယံ သိန်း ၅၀၀၀ ဗ ၆၂၆၂၈၆ မိုးယံ (၃)ကြိမ်မြောက်ကျပ်သိန်း နှစ်ထောင် ဆုကြီးများ (၃)ကြိမ်မြောက်ကျပ်သိန်း နှစ်ထောင် ဆုကြီးများ သ ၃၅၈၇၉၈ ဓ ၇၀၅၅၈၈  ၇၁၄၅၈၉ (၃)ကြိမ်မြောက်ကျပ်သိန်း တစ်ထောင် ဆုကြီးများ (၃)ကြိမ်မြောက်ကျပ်သိန်း တစ်ထောင် ဆုကြီးများ …
(၃)ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၁၀၀၀ တန် အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ် တိုက်ရန် ( စ/ဆုံး ) အပြည့်အစုံ Read More »
(၃)ကြိမ်မြောက် သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ထီပေါက်စဉ်
(၃)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် သိန်းတစ်သောင်းခွဲမှငါးသိန်းဆုအထိအက္ခရာနဲ့ဂဏန်းအားလုံးအစဉ်လိုက်တူရမည် သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ကခ ၅၈၅၀၂၄ သိန်းငါးထောင် ဎ ၈၃၄၁၄၇ ဗ ၆၂၆၂၈၆ သိန်းနှစ်ထောင် သ ၃၅၈၇၉၈ ဓ ၇၀၅၅၈၈ ဌ ၇၁၄၅၈၉ သိန်းတစ်ထောင် ဈ ၆၉၆၉၇၉ ဒ ၁၁၉၇၈၅ ခ ၇၇၂၄၃၅ ဂ ၇၇၃၀၇၂ Postတစ်ခုချင်းထီပေါက်စဉ်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့Pageအားlikeလုပ်ပေးထားပါခင်ဗျပေါင်းချုပ်နဲ့ပြန်တိုက်ပါ ၃ကြိမ်မြောက် ၁၀၀၀တန်ထီပေါက်စဉ် သိန်း(500) ယ ၂၃၉၃၈၁ န ၃၅၇၈၆၈ ဠ ၃၀၂၉၅၁ ဗ ၁၃၉၈၂၄ ထ ၇၄၅၉၁၃ ည ၁၅၆၀၆၁ ခ ၇၁၅၀၀၄ ဒ ၉၄၀၄၁၃ ပေါင်းချုပ်နဲ့ပြန်တိုက်ပါ